Qu 12 क्वार्टर कति छ? - उत्तर हेर्नुहोस्!
यदि तपाईं कन्भर्टरमा हेर्नुभयो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि हामी पहिले नै 12 क्वार्टर्समा टाईप गर्यौं जसले हामीलाई $ २.०० को जवाफ दिन्छ। यसले हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिन्छ कि 'quar क्वार्टर कति हो?' Quar क्वार्टर बराबर $ २.००!
अब तपाईंको पालो हो! तपाईंको कति क्वार्टरमा टाइप गर्नुहोस् र हाम्रो क्वार्टरमा डलर रूपान्तरकले तपाईंलाई बताउँछ कि डलरमा कति छ। क्वार्टर्स देखि डलर सजिलो भयो, तपाईंसँग कति क्वार्टरहरू छैन। Quar क्वार्टर वा ,12००० क्वार्टर, हामी तपाईंलाई यो सबै समाधान गर्न मद्दत गर्दछौं।
१ 1965 since5.670 देखिको सबै क्वार्टरहरू ठीक exactly..0.2० ग्राम तौल जो ० औंस बराबर हुन्छ। Quar 12 क्वार्टर तौल कति छ? Quar 12 क्वार्टरको वजन 68.04 0.06804. weigh12 ग्राम जुन ०.2.4 किलोग्राम बराबर छ। वा यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने, quar 0.15 क्वार्टर १ounce औंसको तौल हो जुन ०.XNUMX१२XNUMX पाउन्ड हो!
यदि तपाईंसँग quar क्वार्टरहरू छन् भने तपाईंले 12१.62.37 ग्राम तामा र 5.67 ग्राम निकल तपाईंको हातमा समात्दै हुनुहुन्छ। किलोग्राम सर्तमा त्यो ०..0.06237१0.00567 किलोग्राम तांबे र ०.०0.138 kil किलोग्राम निकल हो। वा यदि तपाईं पाउन्डमा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ भने, त्यहाँ 0.012 क्वार्टरमा ०.० 12 १12 पाउन्ड तांबे र ०.०2.2 पाउन्ड निकेल हुन्छ। त्यो भनेको भनेको जस्तै हो कि quar क्वार्टरमा १.0.2 औंस तांबे र ०.XNUMX औंस निकल हुन्छ।
आधुनिक दिन क्वार्टर १. 1.75 मिलिमिटर बाक्लो छ जुन ०.0.0689 inches इन्च बराबर छ। यदि हामीले हाम्रो quar क्वार्टर एकसाथ भेट्यौं भने, ढेर १ 12 मिलिमिटर लामो हुनेछ जुन १. which सेन्टीमिटर वा ०.०१21 मिटर बराबर हुन्छ। फिटमा, quar क्वार्टर ०.2.1 feet फिट अग्लो छन् जुन ०.0.021१ इन्च जति छ।